Xuquuqda iyo waajibaadka caruurta iyo dhalinyarada - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Caruurta > Xuquuqda iyo waajibaadka caruurta iyo dhalinyarada
Finland dadka ka yar 18 sannadood waa carruur. Sida uu qabo sharciga Finland, carruurta waa in loola macaamilaa si sinnaan ah. Waa in ay helaan saameyn ku yeelashada arrimaha iyaga quseeya. Markasta oo uu cunugga da’ ahaan weynaado waa in wax badan lagu xisaabtamaa aragtidiisa. In xuquuqda cunuggu ay hirgasho waxaa Finland ku ilaaliya wakiilka ilaalinta caddaaladda ee baarlamaanka iyo wakiilka arrimaha carruurta.
Xuquuq iyo waajibaad:
Ilmuhu waa inuu ka qeybqaataa waxbarasho u carbiyeenta.
Ilmuhu waxbarashada waa ku billaabi karaa ogolaansho gaar.
Xuquuqda iyo waajibaadka:
Iskuulka ayaa bilowda (waxbarashada qasabka ah). Haddii ay jiraan xaalado gaar ah iskuulku waqti dambe ayaa la bilaabi karaa.
Lama badeli karo ilmaha magaciisa ama magaca qoyska ee ilmaha, ilaa laga helo ogolaanshada ilmaha.
Ilmaha laguma dari karo koox diimeed ayadoon ilmaha ogolaansho laga haysan. Sidoo kale ka bixitaanka diinta waxaa loo baahan yahay ruqsada ilmaha.
Haddii ay waalidiintu kala tagaan ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu diido la kulanka mid ka mid ah waalidiinta.
Ilmaha lama adhabtigarayn (waalid kale sharci ahaan uma korsan) karo ilaa asiga ruqsad laga helayo.
Haddii qoyska dhexdiisa ay dhibaato ka jirto, ilmuhu wuxuu codsan karaa in loo sameeyo daryeel ku meelgaar ah. Daryeelka ku meelgaarka ah waxaa loola jeedaa, inuu ilmuhu daganaado meel aan ahaynn guriga waalidiintiisa.
Ilmuhu baaskiil kuma wadi karo wadada ay dadku ku lugeeyaan.
Ilmuhu wuxuu qaban karaa shaqooyin fudud dhawr saacadood maalintii, haddii aysan wax dhibaato ah caafimaadkiisa u geysaneyn ama aaditaanka iskuulka. Heshiiska shaqada waxaa loo baahan yahay inay sixiixaan waalidiintu.
Wuxuu geli karaa heshiiska shaqada. Si kastaba ha ahaatee waalidiintu waxay burburin karaan heshiiska shaqada ee ilmaha da'doodu ka yar tahay 18 sano, haddii uusan ilmuhu waalidiinta waxba uga sheegin shaqada.
Dhalinyaradu waxay xaq u leeyihiin inay furtaan koonto bangi ayna iyagu maamulaan hantida ay shaqadooda ku kasbadaan.
Da yarku wuxuu qaadan karaa ruqsada waditaanka mootada yar yar, cagafka iyo weliba ruqsada waditaanka doomaha matoorka leh.
Da yarku wuxuu baaskiil ku wadi karaa ilmo da'diisu ka yartahay 10 sano.
Da yarku wuxuu ku biiri karaa ama ka bixi karaa diin asagoo kaashanaya ruqsada qoraalka ah ee waalidiintiisa.
Qofka dhalinyarada ah wuxuu mas’uul ka yahay dambiyada uu sameeyo. Haddii qofka dhalinyarada ah uu dambi galo, waxaa lagu soo oogi karaa laguna xukumi karaa dambiga uu galay.
Xadka ilaalinta Ilmaha ee xagga galmadu waxuu ku eg yahay 16 sano. Tan macnaheedu waa, in camaliyada xaga galmada ah ee lala sameeyo ilmaha da'doodu ka yar tahay 16 sano ay tahay dambi lagu mutaysanayo ciqaab (tan waxaa ka baxsan xiriirka galmada ee dhexmara ilmaha da'doodu iyo koritaankoodu isku midka yahay). Ka iibsiga adeega galmada ilmaha da'doodu ka yar tahay 16 sano waa dambi.
Wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato ruqsada waditaanka ee loo yaqaan kaarka-A ee mootooyinka fud-fudud lagu wado.
Wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato kaarka caymiska shakhsiyadeed. Tan macnaheedu waa, in ilmaha jira 16 sano laga caymiyey xaga waayeelnimada, shaqa la'aanta iyo in waliba in magdhawga caymiska jirada asaga loo soo shubayo, ee aan tusaale ahaan la siineyn waalidiinta.
Xuquuqda lacagta gunada caruurtu way dhamaanaysaa.
Dhalinyaraha wuxuu dalban karaa lacagta kaalmada waxbarashada ee Keladu bixiso. Dakhliga qofka ilmaha mas’uulka ka ah ayaa saamayn ku yeelanaya caddadka lacagta kaalmada waxbarashada iyo ogolaanshadeedaba.
Qaangaarku wuxuu xaq u leeyahay
codayn karaa doorashooyinka dawliga ah iyo degmooyinka
dalban karaa baasaboor
ku biiri karaa ama ka bixi karaa koox diimeed
go’aan ka gaari karaa maamulitaanka isticmaalka hantida uu leeyahay.
Qaadan karaa leysinka gawaarida lagu wado (tusaale ahaan mootooyinka, gawaarida yar-yar)
Heli karaa dhalashada (18-22 sano), haddii uu Finland degenaa mudo dheer.
Waxbarashada khasabka aho ayaa dhamaanaysa, haddii aan horay loo dhamayn.
raga waxaa saaran waajibaadka inay ku biiraan (ciidamada ama adeega shibilka)
Sii hubsan uga aqri waxyaabaha ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka qaangaarka bogga InfoFinlandi Xuquuqdaada iyo waajibaadka Finland.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 17.09.2020 Boggan war-celin ka soo dir